Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0313 lat
Lesona 03 : Andriamanitra masina sady marina (Joela)
13 - 19 Apr. 2013
Tsofy ny trômpetra !
Alatsinainy 15 Apr.
Rehefa miseho ny loza amin’ny zavaboary, dia mahatonga fanontaniana maro hipetraka, toy ny hoe: “Nahoana no navelan’Andriamanitra hitranga izao?” “Nahoana no nisy ny velon’aina ary ny hafa kosa maty?” “Misy lesona tokony horaisintsika ve?” Tsy nisalasala i Joela nihevitra fa mety hampitodika ny saina handinika lalindalina kokoa ny drafitr’Andriamanitra ho an’izao tontolo rehetra izao ny fahapotehana nafitsoky ny valala. Ao amin’ny toko 1 no itantaran’ny mpaminany, teo ambany fitarihan’Andriamanitra, ny fotoan-tsarotra diavin’ny firenena sy ny toetry ny ara-panahin’ny olona teo amin’ny tany. Tsy nisy na inona na inona navelan’ny valala hiangana mba hatao fanatitra ho an’i Jehôvah. Ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra aidina dia anisan’ny fanatitra fanao isan’andro tao amin’ny tempoly, araka ny toromarika voalaza ao amin’ny Eks. 29:40 sy ny Nom. 28:5-8. Toe-javatra mafy tokoa ny fitsaharan’ny fanaterana fanatitra kanefa tokony ho fampitandremana ny vahoaka izany ny amin’ny toe-javatra sarotra nisy azy ireo. Ny fahaverezan’ny tombontsoa, eny fa na dia ny fanolorana fanatitra aza, dia naneho ny fahatapahan’ny fanekena nisy teo amin’Andriamanitra sy ny Isiraely. Tsy mba tahaka ireo mpaminany hafa i Joela ka tsy nivalampatra loatra tamin’ny fanaovana fanadihadiana ireo tsy fahombiazan’ny vahoaka. Nahaliana azy mihoatra lavitra noho izany ny nisaintsaina maharitra ny amin’ny fanafody nasain’ilay Dokoteran’ny Isiraely mahagaga nampiasaina.
Vakio ny Joe. 1:13-20. Inona no lazain’i Joela amin’ny vahoaka eto? Na dia manokana aza ny toe-javatra resahina eto, dia amin’ny fomba ahoana no mahatonga izay voalaza eo ho fitalahoana efa fahita manerana ny Baiboly, na ao amin’ny Testamenta Taloha izany na ao amin’ny Testamenta Vaovao?
Nampirisika mafy ny mpitarika fivavahana ny mpaminany mba hanokanany andro iray hivavahana sy hifadian-kanina ka handinihin’ny olona lalina ny fony sy hialàny amin’ny otany ary hiverenany amin’Andriamaniny. Amin’izany fomba izany no hananan’izy ireo fanandramana ny amin’ny fitokisana vaovao indray ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fahamarinany. Amin’ny farany, izany loza izany dia mety hitarika ireo mpino hanana fifandraisana lalindalina kokoa amin’ny Tompony.
Voalaza ho Tompon’ny zavaboary Andriamanitra manerana ny Soratra Masina manontolo, Izy no nahary izany, mihazona sy mamelona izany, ary mampiasa izany koa ho amin’ny tanjona masina kendreny. Eo anatrehan’izao loza mihatra amin’ny zavaboary izao, dia tsy tokony ho ny fitafiany no triatriarin’ny olona, hoy ny mpaminany Joela, fa tokony ho ny fony mba hisokafany amin’ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny fangoraham-pony.
Mety hamely antsika amin’ny endrika maro samihafa ny loza. Rehefa mitranga izy ireny, ka tsy jerena izay mety ho fahatakarantsika ny hevitra fonosin’izy ireny sy ny antony nahatonga azy ireny, inona ireo teny fikasana ao amin’ny Baiboly azontsika ifikirana mba hahazoantsika fanantenana sy hery hiatrehana azy ireny? Inona ireo teny fikasana misy dikany manokana aminao?